မကြာမီ ဂျပန်နိုင်ငံသို့ ပညာသွားရောက်သင်ယူမည့် Asia Kakehashi ပညာသင်ဆုရကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအတွက် Orientation ပွဲပြုလုပ်ခြင်း အခမ်းအနား
Orientation for the Asia Kakeshashi scholarship students leaving for Japan
Asia Kakehashi အစီအစဥ်ကသိကြပါသလား။
ဤအစီအစဥ်အာဆီယံနိုင်ငံများမှ အသက် ၁၅ နှစ်မှ ၁၈အကြားရှိသော လူငယ်များအတွက် ဂျပန်အစိုးရက ထောက်ပံ့ပေးသော နိုင်ငံတကာယဥ်ကျေးမှုဖလှယ်သည့်အစီအစဥ် ဖြစ်ပါသည်။
လူငယ်များသည် ဂျပန်နိုင်ငံရှိအထက်တန်းကျောင်းများတွင် ပညာသင်ယူခြင်းကြဖြင့်လည်းကောင်း၊ ဂျပန်နိုင်ငံရှိ အမျိုးမျိုးသော ပညာရေးနှင့်ယဥ်ကျေးမှုဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများတွင် အာဆီယံနိုင်ငံများမှ သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူ ပါ၀င်ကြခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း အာဆီယံနိုင်ငံများအကြား "Kakehashi" (ဂျပန်ဘာသာစကားတွင် "ပေါင်းကူးတံတား" ဟု အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုပါသည်) ဖြစ်လာကြရန် ယုံကြည်မျှော်လင့်မိပါသည်။
မတ်လ ၂ရက်နေ့တွင် MAJA နှင့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဂျပန်သံရုံးတို့က ၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွက် ရွေးချယ်ခံထားရသည့် Kakehashi ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူ ၁၆ ‌ယောက်အတွက် Orentation ပွဲကို ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ၁၀ လခန့်ကြာ ပညာတော်သင်အစီအစဥ်ဖြင့် ဂျပန်နိုင်ငံသို့ မကြာမီ ထွက်ခွာတော့မည်ဖြစ်ပါသည်။
ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများ အစစအရာရာ အဆင်ပြေပါစေကြောင်းနှင့် ဂျပန်နိုင်ငံတွင် နေထိုင်သမျှကာလပတ်လုံး မမေ့နိုင်စရာ အမှတ်တရများ ရရှိနိုင်ပါစေကြောင်း ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးအပ်ပါသည်။
Asia Kakehashi အစီအစကို စိတ်ပါ၀င်စားပါက MAJA နှင့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဂျပန်သံရုံးတို့၏ တရား၀င် Facebook စာမျက်နှာကို follow လုပ်ထားနိုင်ပြီး၊ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ခုနှစ်အတွက် လျှောက်လွှာများကို မကြာမီ ခေါ်ယူမည် ဖြစ်ပါ‌ကြောင်း သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါသည်။
【Orientation for the Asia Kakeshashi scholarship students leaving for Japan!】
Do you know Asia Kakehashi Project?
This is an international exchange programs for youths from Asian countries between the ages of 15 and 18 supported by the Japanese Government.
They are expected to be “Kakehashi”,that means bridge in Japanese, among Asian countries through studying in Japanese high schools and experiencingavariety of educational and cultural activities with Asian friends in Japan.
On2March, MAJA and the Embassy of Japan held the orientation for 16 students who have been selected as Kakehashi students for 2020 batch. They are leaving for Japan soon and joining the program for around 10 month.
We wish them all the best and hope their stay in Japan will be truly memorable.
Interested in Asia Kakehashi project?
Posted Under by: Awards | KAKEHASHI Proj
visitors : 50,327